China Curcumin ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ - H&Z စက်မှုလုပ်ငန်း
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စက်ရုံထုတ်ယူမှုနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ယူမှုများ > ကူကူမင်း
Curcumin သည်အစားအစာ၊ အစာနှင့်ဆေးဆိုင်များ၊ သဘာဝအလျောက်အစားအစာအရောင်ဖျော့ဖျော့ဆေးဖြစ်သည်။
ကူကူမင်း CAS NO:458-37-7
စစ်ဆေးမှု - ၉၅% ၉၈%
1. ကူကူမင်း can be applied in pharmaceutical field.
(1) ကူကူမင်း is the killer of prostate cancer.
(2) ကူကူမင်း Powder can help to prevent dementia.
2. ကူကူမင်း can be applied in health care products.
(1) ကူကူမင်း can improve immunity.
(2) ကူကူမင်း has the effect on lowering blood pressure, and protecting the liver.
3. ကူကူမင်း can be applied in cosmetic field.
(1) ကူကူမင်း can help whiten the skin and reduce the freckle.
hot Tags:: Curcumin, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, တရုတ်, တရုတ်လုပ်, စျေးပေါ, လျှော့စျေး, အနိမ့်စျေးနှုန်း